Soo dejisan Mozilla Firefox 85.0.1 – Windows – Vessoft
WindowsInternetkaDareemaha WebkaMozilla Firefox
Bogga rasmiga ah: Mozilla Firefox
Wikipedia: Mozilla Firefox
Mozilla Firefox – browser caan ah oo si dhakhso ah oo taageero teknoolajiyada casriga ah. software wuxuu bixiyaa joogis raaxo leh in ay u birta ku haboon navigation, ilaalin habboon ka dhan ah spyware, spellcheck, dhirta gaarka ah ee website-yada, iwm Mozilla Firefox leedahay a dabacsan of qalab si astaysto browser ee baahida user mahad internet. software waxay bixisaa qaab saxda ah ee content webpage iyo Streaming video. Mozilla Firefox ku jira xulasho badan oo lagu daro oo dar qaababka cusub in browser ama ballaariyo kuwa hadda jira.
web Fast bogga loading
ilaalinta lagu kalsoon yahay
set A ee goobaha dabacsan
daro iyo kororsi badan ayaa
Soo dejisan Mozilla Firefox
Faallo ku saabsan Mozilla Firefox
Mozilla Firefox Xirfadaha la xiriira